• manokana in SPC Flooring
Hebei UTOP TECHNOLOGIES CO., LTD. dia manokana ao amin'ny SPC Flooring famokarana, dia misy orinasa mpamokatra entana andalana tanteraka ny mifanerasera - Extruding-UV Coating-fandringanana Slotting-fonosana, izay manarona ny SPC Flooring rojo raharaha hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
• Mandray soa avy amin'ny be.
Isika tanteraka nitoetra ny iraisam-pirenena famokarana dingana fenitra,-dehibe tany am-boalohany famokarana fitaovana avy any Alemaina sy Taiwan mba hahazoana antoka ny tena mandroso extrusion, Rolling dingana sy amin 'ny manam-paharoa formulating ny fomba fahandro mba hahatonga ny Flooring soa aman-tsara, mitafy-mahatohitra, mafy orina, mateza sy ny Eco -friendly. Misy tena tsara laza ny SPC Flooring, ny Flooring tsy ampy amin'ny toerana isan-karazany, toy ny an-tranonay, ara-barotra, birao, ara-pitsaboana, sekoly, sns Ary hianao dia afaka mankafy ny fahafinaretana ny DIY.
Manana orinasa telo amin'ny 14 famokarana andalana izay afaka mamokatra 20,000㎡ isan'andro. Afaka manafaka ao anatin'ny 10 andro amin'ny vidiny tsara indrindra. Ny ambany indrindra dia mba 200㎡. Misy 5 sequences ny henjana tsara fisafoana alohan'ny fitoeran-pamatrarana mba hiantohana ny kalitao tsara indrindra. Koa izahay manome tolotra tsara kokoa ho an'ny mpividy OEM avy amin'izao tontolo izao. Isika ihany koa dia afaka manome patanty certifications, toy ny UNICLICK2G, UNIFIT5G, Floor SCORE, tamin'ny taona sy SGS.
· No nanampy ny Strong Professional R & D Personnel
R & D mpiasan'ny manampy antsika hatrany fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy trandrahana fikasana vaovao hitarika SPC rihana tsena.
Isika koa ara-barotra iraisam-pirenena 20 matihanina tehina maherin'ny 10 taona ny traikefa mba manome asa matihanina.
· Fidio UTOP SPC Floor, UR TOP safidy.
Mafana be mpividy SPC Flooring UTOP dia ho mpivaro-bary tamin'ny manerana izao tontolo izao, toa an'i Etazonia, firenena Eoropeana, firenena any Azia Atsimo Atsinanana, firenena Afrikana sy ny sisa.
Tongasoa eto amin'ny hitsidika Hebei UTOP TECHNOLOGIES CO., LTD. amin'ny fotoana rehetra.
Room 1006, Financial Building 001, 598 Zhongshan East Road, Chang'an District, Hebei, Shina (050000)
4mm Spc Flooring, Hentitra Core Spc Flooring, Unilin Tsindrio Spc Flooring, Spc Flooring 7mm vinyl, Tsindrio Spc Flooring , Rigid Vinyl Plank,